Khabiirka Kala Duwan: Google 'Algorithm Search Algorithm waxay noqon kartaa mid Dhiirigelineysa Dadka Baadi ah
Khabiir kasta oo SEO ah, daabacaya, ama qoraaga qoraalka ayaa ogyahay in dhismaha xidhiidhka uu yahay mid ka mid ah qodobada muhiimka ah ee saameeya darajada bogga boodboodka raadinta natiijooyinka natiijooyinka. SEO wuxuu xaqiiqdii u baahan yahay xiriiro, iyo dadka la shaqeeya SEO waxay u baahan yihiin iyaga sidoo kale.
Laakiin makiinadaha raadinta, gaar ahaan Google, waxay u muuqdaan inay ubaahan yihiin xidhiidhada ugu badan, tani waxay keenaysaa waxyeelo ka badan ta wanaagsan. Qalabka raadinta Google wuxuu isticmaalaa isku xirka sida metric oo ah mabaadi'da goobaha liisaska. Tani waxay ka dhigtay mawduuca dhismaha isku xirka si aad u caan ah oo loo qabto munaasabado kala duwan - restaurant and bar furniture manufacturers. Qorayaasha, bloggers, iyo daabacayaashu marwalba waxay raadinayaan hababka cusub ee helitaanka isku xirnaanta si ay u xaqiijiyaan in content ay u taagan tahay fursad wanaagsan oo ay ku gaari karaan dhagaystayaashooda.
Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu sharxayaa in miisaanka la isku xiro marka goobaha liisaska ay u muuqdaan in ay riixaan cabbiraadyo kale oo muhiim ah oo loo maro dhabarka. Waa iska cadahay hadda in Google xoogga la saaro tayada tayada, maamulka goobta, iyo saameynta maadaama ay go'aamiyeyaashu yihiin kuwa ugu sarreeya ee liiska. Algorithms search ku dhowaad gebi ahaanba iska indha tiri dhinacyada kuwaas oo ku xiran links.
Natiijo ahaan, dhisayaasha isku-xiraha ayaa si aan kala go 'lahayn u eegaya iskuxireyaal halkii ay ku maalgelin lahaayeen dadaal lagu abuurayo tayo tayo leh oo saameyn leh oo awood leh..
Macaamiisha ayaa inta badan ka soo jeeda cilladahan ganacsi. Halkii laga heli lahaa waxtar leh maaddaama ay ka filanayaan boggaga ku yaal bogga ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta raadinta, waxa ay helayaan waa content aan caddayn oo la adeegsaday isticmaalka xiriirka kaliya ee lagu daro sare.
Waxaa lagu doodi karaa in culeyska Google uu xoogga saarayo xiriirka uu kor u qaaday horumarinta aragtida ah in wax badan oo ka mid ah wax kasta oo laga heli karo webka ay la macaamili karaan abuuraha. Waa maskaxdani oo laga yaabo in ay dad badani riixdo in ay is-xakameyso xidhiidhada iyagoo rajeynaya in maadooyinkoodu ay sare u qaadayaan.
Haddii mashiinnada raadinta ay culeys yar saaraan xiriirrada marka ay samaynayaan algorithms raadinta, hal abuur kasta oo isku dhafan ayaa ku dhagan doona asaasiga ah SEO-ga organic. Waxay ka sii walaacsan yihiin in la abuuro goobahooda iyo abuuritaankooda waxtarka tayada ugu fiican si ay macaamiishu u helaan waxa ay raadinayaan goobahaas. Tani waxay ka dhigeysaa in macaamiisha ay ku kalsoon yihiin goobahaas. Dabcan, cidina waxay jeclaan lahayd in la iloobo dhismaha isku xidhka. Laakiin ka dib markaad daryeesho qaybaha ugu muhiimsan ee SEO, maaha wax sahlan marka loo eego xiriirinta tayada ee goobta. Si kale haddii loo dhigo, goobta ayaa la jeclaan lahaa maxaa yeelay waa mid la mid ah.
Maaddaama ay hadda taagan tahay, Google ayaa u oggolaanaya in goobaha ay isticmaalaan xirriir ay ku khasbaan dadka in ay jecelyihiin. Nasiib darro, xitaa goobo waaweyn ayaa sameeya waxyaabahan aan la aqbali karin, midna waa laga tagay in la yaabiyo sababta ay Google ugu ogolaatay inay ka baxaan.
Haddii dhibaatada xiriirka spammy waa in la helo xal, Google waa in ay ku taal bartamaha. Waa in la joojiyo bixinta khudbado badan oo miisaankeeda ku salaysan iyo in diiradda la saaro waxyaabaha ugu muhiimsan ee internetka: midnimada, faa'iidada, saameynta, iyo maamulka. Raadinta mashiinka waa inay sameeyaan heerka ciyaarta ciyaarta - u ogolaato goobaha inay ku tartamaan tayada content iyo sida ay u daryeeli karaan baahida macaamiisha. Haddii aysan taasi dhicin, dad badan ayaa sii kobcaya fikradda ah in xiriirada ay yihiin boqorka SERP oo rikoodhka ah oo kaliya kordhin doona qadarka wax aan faa'iido lahayn ee shabakada, sida hore u marqaati furay.